Caliyaw (Galeydh) Maxaad Qoonsatay? – Waraysi Xasaasi ah | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, ALL LAASKA, PUNTLAND, SOMALI NEWS, Somaliland	> Caliyaw (Galeydh) Maxaad Qoonsatay? – Waraysi Xasaasi ah
Sida lawada ogsoon yahay waxa dhawaan xukuumadda KMG Soomaaliya iyo Somaliland ay magacaabeen guddiyo uga qayb galaya wadahadalka lagu wado inay dhawaan yeeshaan,waxaana indhawayd lays weydiinayay waxa laga wada hadlayo,cidda leh inay wada hadlaan.
Waxaana iskasoo daba dhacaya su’aalo aan jawaab loohayn una muuqata inaan qolona ogeyn waxa laga wada hadlayo,arrintuna ay ku dambeyn doonto mashaariicda loo yaqaan ladagaalanka argagixisada iyo Budhcad badeedka oo lagu soo kordhiyay dhisidda jeelal hor leh!
Waxaase arrintii guddiyada ee la magacaabay qoonsaday Prof. Cali Khaliif Galeydh oo hormood u ah maamulka dhawaan la magacaabay ee Khaatumo,wuxuuna sicad u sheegay arrimo badan oo muujinaya sida uu uga soo horjeedo guddiyadaa iyo waliba ragga lagu daray ee dhinacyada Somaliland iyo Puntland ah ee ay isku Beesha yihiin,iyo waliba meesha ay kasoogashay Puntland,lagana tagay qaybtiisii iyo waxyaalo kale oo badan oo aad xagga hoose aad kaga bogan doontid oo uu ku bixiyay wareysi ay Laanta af-soomaaliga ee Idaacadda BBC du la yeelatay Apr.15,2012 oo uu qaaday Mr. Catoosh,waxaana hadaladiisa kamid ahaa:
Waxaannu maqalay waa guddi sidii shirkii London lagu qeexay ee ahayd waxaa la farayaa oo international community gu ay soo jeedinayaan in maamulka Somaliland iyo dawladda KMG ah ay wada hadlaan cidiona ma tilmaamin waxa laga wada hadlayo,waqtiga la wada hadlayo iyo goorta lawada hadlayo.
Warkaa intaas ayaannu ku ogeyn,shalayna waxaa nasoo gaadhay –,waxaa ka horreysay in maamulka somaliland inuu shan ka mid ah golihiisa wasiirada ay magacaabeen
Shalayna waxaan maqalay in dawladda KMG ah ay magacawday 5 meel ah iyo laba meel ah,warkaasina isagoo qoran ma hayno,si rasmi ah oo loo soo gaarsiiyayn — maaha.
Marka maxaad qoonsatay Profossore?
Waxaan qoonsanay tirada waxaa la yidhi waa 7,laba na mindhaa waxaa loo qoondeeyay Puntland,waxaan annagu markaa qoonsanay, sidee lagu go’aamiyay! Waxa laga wadahadlayaa muxuu yahay!
Arrinta annaguna markaa daraf ayaannu kanahay xooggan, qadiyadayad waxa naloo dilaya oo naloola dagaalamayaaba waa midnimada Soomaalida.
Haddii arrinta Soomaaliland laga hadlo iyo maamulka Soomalilandna waaxaannu qoonsanay guddiga layska magacawday ee waliba lagu daray Somalilandna, nin u dhashay dhalasho ahaan u dhashay Sool, Sanaag iyo Cayn.
Puntlandna nin isna Sool,Sanaag iyo Cayn u dhashay ayaa lasoo magaaabay.
Khaatuno ama Sool,Sanaag iyo Cayn aan ahayn maamulkeeda cid ay magacawday cid aan ahayn inayan ka qayb gali karin oo odhan karin,”khaatumaan matalaa”.
Taa waxaad ula jeeddaa Profossore haddaan si kale udhigo wufuudda uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland iyo 7 da dambe ee dawladda KMG ah ay magacawday baa waxaa ku jira xubno reer khaatumo ah?
Maye, niman u dhashay Sool, Sanaag,iyo Cayn.
Deegaanka Khaatumo niman u dhashay?
Nimanse kamid ah ama kalsooni maamulka khaatumo iyo golayaashiisa ay ku qabaan nimanhaasi maaha mana matali karaan.
Cidda markaa magacawdayna,waxay u magacawdeen dan iyo aragti yar oo gaaban oo aan midho badan dhalayn.
Idinku marka maxaad rabteen? mawaxaad rabteen in laydinku dari,mawaxaad rabteen in laydin qiimeeyo maamul goboleed ahaan sida khaatumo ee aad hadda udhisan tihiin,maxaad rabteen?
Annagu waxaan rabnay wuxu inay sinaasho jirto haddii la yidhi waxaa wada hadlaya maamulka Soomaaliland iyo dawladda dhexe ee fadaraaliga ah haddii laga magacaabo golaha wasiirada ee xamar jooga micnayba sanayn lahayd!waxaan garawshooyo aan ka bixinaynaa una aragnaa gef,maamul kamid ah afar shan maamul oo waddamka jira oo Puntland la yiraahdo inuu dad meesha usoo dirsado.
Haddiiba ay markaa noqonayso cidda Counsel of ministers (Golaha Wasiirada) ka ku jira, dee! kuwa sool iyo sanaag iyo cayn-ba ka tirsan waa ku jiraan, counsel of ministers ka xamar jooga laguma darin!.
Waxaaba kaba sii daran kuwo aanba xamarba joogin oo Counsel of ministers ka aan kamid ahayn! oo dawladda KMG ah aan kamid ahayn inay qadiyadsa loo magacaabo oo Garowe laga keeno, waliba!!!
Waxaa xal ah waa soo dhawayneynaa Somaliland in uu dib ugu soo noqdo xerada ama uu kamid noqdo qaranka Soomaaliyeed ee ay awalba kamid ahaayeen ee ay yidhaahdeen waa ka baxnay.
Jawaabta Laga Bixiyay.
First day of trial of Norway gunman Breivik ends – VOR Breivik trial begins in Oslo